foodpanda vouchers and promo codes | foodpanda Myanmar | foodpanda
foodpanda က ၅၀% ထိလျှော့ဈေးများနဲ့ ပိုမိုသက်သာစွာ စိတ်ကြိုက်မှာယူရင်း
foodpandaက ၅၀% ထိလျှော့ဈေးများနဲ့ ပိုမိုသက်သာစွာ စိတ်ကြိုက်မှာစားရင်း ဆိုင်များနဲ့ ပို့ဆောင်သူများကို အားပေးလိုက်ပါ
အမိုက်ဆုံးလျှော့ဈေးများစွာ က foodpanda မှာ သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေမှာပါ။
ဒါကြောင့် အခုပဲ foodpanda ကနေ စိတ်ကြိုက်မှာယူလိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို foodpanda အက်ပ်မှာ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၅၀% အထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့ အတန်ဆုံး မှာယူလိုက်ပါ ကုတ်မလိုပါ ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး ဒေသတွင်းကုန်စုံဆိုင်တွေကို ၂,၅၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေး ရယူရင်း အားပေးလိုက်ပါ။ * ၈,၀၀၀ ကျပ်နဲ့အထက် မှာယူမှုများအတွက်. အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ LOVELOCAL ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ထပ်ဆောင်း ၃၀% လျှော့ဈေး (၃,၀၀၀ ကျပ်အထိ) နဲ့ မှာယူပြီးလိုက်ပါ အနည်းဆုံး ၅,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် မှာယူသော အစားအသောက်ပို့ဆောင်မှုအော်ဒါများအတွက်သာ။ နေ့လည် ၂ မှ ညနေ ၅ နာရီ အတွင်း ဘောက်ချာအရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာကုတ်ကို foodpanda appနှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ သြဂုတ်လ ၂ မှ ၆ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
အထူး ၅ ရက် အမိုက်ဆုံးလျှော့ဈေးများ ကုတ်မလိုပါ သြဂုတ်လ ၉ မှ ၁၃ ရက်ထိ သြဂုတ်လ ၁၆ မှ ၂၀ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
အပတ်စဉ်တိုင်း စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက် အထူးလျှော့စျေးများ ကုတ်မလိုပါ သြဂုတ်လ၏အပတ်စဉ်တိုင်း စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက် သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် ပထမဦးဆုံးမှာယူမှုအတွက် ၃,၀၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေး
* ၆,၀၀၀ ကျပ်နဲ့အထက်မှာယူမှုများအတွက်
(သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် ပထမဦးဆုံးမှာယူမှုအတွက်သာ။ အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။) PANDA3KOFF စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက်
foodpanda Shops (ဆိုင်များ) အတွက် လျှော့ဈေးများ
ကုန်စုံဘာပဲလိုလို မိနစ် ၃၀ အတွင်းအရောက် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာမှာယူလိုက်ပါ ကုတ်မလိုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်အတွက် foodpanda app နှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ပထမဦးဆုံး foodpanda Shops (ဆိုင်များ) မှမှာယူမှုများအတွက် ၂,၀၀၀ ကျပ် လျှော့ဈေး * ၈,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် မှာယူရမည်ဖြစ်ပြိး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ SHOPS2KOFF ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ foodpanda Shops အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်သာ
foodpanda shops အားလုံး‌‌‌မှ အော်ဒါများအတွက် အပတ်စဥ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင်း ပို့ဆောင်ခအခမဲ့ * ၆,၀၀၀ ကျပ်နဲ့အထက် မှာယူမှုများအတွက်. ကုတ်မလိုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်အတွက် foodpanda app နှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ အပတ်စဥ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင် သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ကုန်စုံဘာပဲလိုလို ၂၀%လျှော့ဈေး (၃,၀၀၀ကျပ်အထိ)နဲ့ သတ်မှတ်ထားသောဆိုင်ကြီးများတွင် အတန်ဆုံးမှာယူလိုက်ပါ။ * ၁၅,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် မှာယူရမည်ဖြစ်ပြိး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်သာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာကုတ်ကို foodpanda appနှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ သြဂုတ်လ ၉ မှ ၁၃ ရက်ထိ သြဂုတ်လ ၁၆ မှ ၂၀ ရက်ထိ လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီဖို့ ၂၀%လျှော့ဈေး (၃,၀၀၀ကျပ်အထိ)နဲ့ အားပေးလိုက်ပါ။ * ၆,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် မှာယူရမည်ဖြစ်ပြိး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာကုတ်ကို foodpanda appနှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ ဩဂုတ်လ ၄ မှ ၁၃ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ဝယ်ယူမှုပမာဏအလိုက် စိတ်ကြိုက်‌ဘောက်ချာများသုံးလိုက်ပါ။ ၁၀,၀၀၀ဖိုးဝယ်တိုင်း ၂,၄၀၀လျှော့ ၁၂,၀၀၀ဖိုးဝယ်တိုင်း ၂,၇၀၀လျှော့ ၁၅,၀၀၀ဖိုးဝယ်တိုင်း ၂,၉၀၀လျှော့ + ပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာကုတ်များကို foodpanda appနှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ ဩဂုတ်လ ၁၆ မှ ၂၀ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
သတ်မှတ်ထားသောဆိုင်များမှာ ၂၅%လျှော့ဈေး (၃,၀၀၀ကျပ်အထိ)နဲ့ အတန်ဆုံးမှာယူလိုက်ပါ။ * ၆,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် မှာယူရမည်ဖြစ်ပြိး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာကုတ်ကို foodpanda appနှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ ဩဂုတ်လ ၂၃ မှ ၂၇ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
လူကြိုက်အများဆုံးဆိုင်ကြီးများတွင် ၂၀%လျှော့ဈေး (၃,၀၀၀ကျပ်အထိ)နဲ့ လိုအပ်ရာကုန်စုံကို အတန်ဆုံးမှာယူလိုက်ပါ။ * ၈,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် မှာယူရမည်ဖြစ်ပြိး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာကုတ်ကို foodpanda appနှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ ဩဂုတ်လ ၂၈ မှ ၃၁ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ကိုယ်တိုင်ယူစနစ် (Pick-Up) အတွက် လျှော့ဈေးများ
၅၀% အထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့ အတန်ဆုံးလေးတွေမှာယူရင်း ကိုယ်တိုင်သွားယူလိုက်ပါ။ ကုတ်မလိုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်အတွက် foodpanda app နှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
အထူး ၅ ရက် အမိုက်ဆုံးလျှော့ဈေးများ ကုတ်မလိုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်အတွက် foodpanda app နှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ သြဂုတ်လ ၉ မှ ၁၃ ရက်ထိ သြဂုတ်လ ၁၆ မှ ၂၀ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
၂၀% အထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့ သတ်မှတ်ထားသောမြို့တွေမှာ အတန်ဆုံးလေးတွေမှာယူရင်း ကိုယ်တိုင်သွားယူလိုက်ပါ။ (ပြင်ဦးလွင်၊ မုဒုံ၊ ပုသိမ်၊ ပခုက္ကူ၊ တောင်ငူ၊ ပုဂံ) ကုတ်မလိုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်အတွက် foodpanda app နှင့် facebook page တွင်ကြည့်ပါ ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး ဒေသတွင်းစားသောက်ဆိုင်တွေကို ၂,၅၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေး ရယူရင်း အားပေးလိုက်ပါ။ *၈,၀၀၀ ကျပ်နဲ့အထက် မှာယူမှုများအတွက်။ အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ LOVELOCAL ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ သုံးစွဲသူအသစ်များနှင့် လက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်
ပထမဦးဆုံး ကိုယ်တိုင်ယူစနစ်နဲ့ မှာယူမှုများအတွက် ၃,၀၀၀ ကျပ် လျှော့ဈေး * ၆,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် မှာယူရမည်ဖြစ်ပြိး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ PICKUP3K ဩဂုတ်လ ၁ မှ ၃၁ ရက်ထိ ကိုယ်တိုင်ယူစနစ် (Pick-Up) အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်သာ
We regularly update this page with the latest foodpanda vouchers in Myanmar, so check back often! You can also follow us on facebook and instagram where we run heaps of promos and vouchers. And if you haven't, download our app for exclusive in-app flash deals!
There are three ways to get free delivery in Myanmar: first, check the free delivery listings on this page. You can also use the "free delivery" filter when you search. Or, tap Free Delivery on the app restaurant page!
You'll find promo codes for foodpanda Myanmar on this page and by following us on facebook and instagram. We also feature exclusive promo codes for bank cards and other partnerships.